Archive du 20190814
Andry Rajoelina Gejain’ireo manodidina azy ?
Nidina ifotony tany amin’ny faritra Vakinankaratra omaly ny filoha Andry Rajoelina ka nampatsahy indray ilay Fandaharanasa Fihariana hanampiana ireo rehetra te hisehatra amin’ny famokarana sy ny fandraharahana ;
Antoko politika maro eto Madagasikara « Mampieritreritra ihany ny fisiany”
Mifandrirotra ny mpanao politika amin`ny resaka fanoherana indrindra eo amin`ny lehiben`ny mpanohitra.
Antoko ABA « Tokony miala ny mpitondra tsy mahay politika ! »
Matoa misy vondrona iray mitsangana dia manana anto-pisiana na « ideologie », hoy ny sekretera nasionalin’ny antoko politika ABA,
Lalàna momba ny fanoherana “Misy fahabangana”, hoy Ranesa Firiana
Teto Madagasikara dia teraka, taorian`ny fandanian`ny vahoaka Malagasy ny lalàmpanorenana tamin`ny taona 2010, ny fisian`ny fanoherana manara-drafitra ao anatin`ny Antenimieram-pirenena.
Solombavambahoakan’i Madagasikara Andrasan’ny vahoaka hamaha ny olana eny ifotony
Betsaka ny hetahetan’ny vahoaka, maro ireo zavatra efa nandrasana hatramin’izay tsy vita eo no efa nampanantenain’ny olona teo aloha tsy vita…
Gidragidra politika Potehina tanteraka Antananarivo…
Mandeha ny serasera samihafa hoenti-manaratsy sy manamavo tanteraka an’i Marc Ravalomanana mivady eo amin’ny sehatra ny politika amin’izao fotoana izao.
Fiainam-pirenena Mihantona tanteraka…
Mifampitaha tanteraka amin`izao fotoana izao ny resaka fifidianana ary mbola izany foana ny resaka mandeha eny amin`ny olo-pirenena.
Jerry Rakotoarijaona « Ny mpanohitra no tena mpanolotsaina ny filoham-pirenena ! »
Efa misy ny dingana atao ankehitriny eny anivon’ny antenimieram-pirenena sy teny amin’ny Carlton Anosy mba hametrahana ny tena atao hoe fanoherana, hoy ny filohan’ny fikambanana Vahaolana anio sy rahampitso na VAR,
Olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo Hovahana amin’ny alalan’ny kamio “citerne”
Tsy mitsahatra ny mikaro-kevitra hamahana ny olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ny mpitantana ny orinasa JIRAMA.
Fijininihan-dra lava na hemophilie 150 no fantatra fa voany eto Madagasikara
Aretina tsy fantatra raha tsy amin’ny alalan’ny fitiliana ra irery ihany ny fijininihan-dra lava na ny “hemophilie”.
Manarintsoa Isotry Hita ihany ilay zaza 9 taona nitsoaka
Zazalahy kely vao sivy taona monja Rakotomalala Iandraina. Very tsy hita ity tovolahy kely ity afak’omaly hariva rehefa nilalao teo an-tokotany ka nirahina.